UQueens obizwa ngokuba ngu-Isabella - Abalawuli abaziwayo beMbali
Abalawuli abaziwayo beMbali
Nguwuphi uRebeth Isabella okhangeleyo? Kukho abaninzi abafazi kwimbali enegama negama! Ndiluhlu oludume kakhulu apha, ngokuqala kuqala, kwaye kunye nezixhumanisi kwii-biographies zezona zibalaseleyo.
U-Isabella I, uKumkani waseYerusalem (1172-1205): watshata kane, waphumelela uyise u-Almaric I kunye nodadewabo uSibyl esihlalweni sobukhosi waza waphumelela intombi yakhe, uMarie waseMonferrat.
IYerusalem yayibukumkani beCrostader, obufunyanwa yibukhosi baseYurophu.
U-Isabella wase-Angoulême (1187-1246): UKumkani uJohn waseNgilani wahlukana nomfazi wakhe wokuqala, u- Isabella waseGloucester (owayengazange abe ngukumkanikazi), ukutshata no-Isabella wase-Angoulême xa eneminyaka eyi-12 okanye ngo-13. waseLusignan, kunye noKumkani waseFransi, kwaphumela ekubeni uYohn alahlekelwe yimpahla yakhe yaseFransi. U-Isabel wayengunina kaHenry III waseNgilani.
U-Isabella II waseYerusalem (1212 - 1228): intombi kaMarie de Monteferrat, ugogo wakhe ongumama ngu-Isabella I waseYerusalem. Uyise wakhe nguJohane waseBrienne. U-Isabella II waba ngumtshakazi njengesana xa unina esweleka emva kokubeleka intombi yakhe. Watshata noFrederick II, uMlawuli oyiNgcwele oyiRoma, kunye nendodana yakhe yayinguConrad II waseYerusalem.
U-Isabella waseFransi (1292-1358), u-queen queen of Edward II waseNgilani: kunye nomthandi wakhe, uRoger Mortimer, wanceda ukumbamba u-Edward II wambulala.
U-Isabella waseMarcaca (1337 - 1406) wayeyinkosikazikazi yaseMalaca, intombi kaYakobi III waseMarkca kunye nomfazi wakhe uConstance of Aragon, intombi kaAlfonso IV waseAragon ngumfazi wokuqala. Waphumelela umntakwabo. Ubukumkani baseMalaca babandakanya iziqithi zaseMelaca naseMinorca, kunye namanqanaba amaninzi.
Ngethuba lobomi buka-Isabella, uBukumkani baseMalaca baba yinxalenye yeKrewn of Aragon.
U-Isabella waseBavaria (1371-1435): intombikazikazi kaCharles VI waseFransi kunye nolawulo lwakhe ngexesha lobudenge.
U-Isabella wasePortugal (1428-1496): umfazi wesibini kaJohn II waseCastile, nomama ka-Isabella I waseCastile neAragon.
U-Isabella wasePortugal (1503 ukuya ku-1539): umfazi kaCharles V, uMlawuli oyiNgcwele oyiRoma, wayeyiminyaka emininzi ngaphambi kokufa kwakhe ekuzaleni kwakhe ngexesha lokungabikho kwakhe.
U-Isabella I waseCastile no-Aragon (1451-1504): owaziwa nangokuthi ngu-Isabella waseCastile, u-Isabella waseSpain, u-Isabella ongumKatolika, u-Isabel la Catolica: wabusa nomyeni wakhe uFerdinand, wagxotha amaMore aseGhanada, wagxotha amaYuda angaphenduki eSpeyin, uxhaswe uhambo lukaChristopher Columbus ukuya kwihlabathi elitsha, wamisa i-Inquisition-kunye nokunye.
U-Isabella Clara Eugenia (1566 - 1633): I-Infanta yaseSpain, iArchduchess yase-Austria, umbusi waseNetherlands waseNetherlands kunye nomyeni wakhe, uArchduke Albert.
U-Isabella Farnese (1692-1766): ukazikazi kaFilipu V waseSpain. Inxaxheba yakhe esebenzayo kwimigaqo-nkqubo yangaphandle kunye neyasekhaya yenza ukuba ayithande.
U-Isabella II waseSpain (1830-1904): Indlovukazi yaseBourbon indima yayo kwi-Affair yemitshato yaseSpain yongezwa kwi-intanethi yeYurophu ye-19.
Imibuzo yeGertrude Stein
Iintlobo zeeNkcukacha zeBhinqa kwiiShakespeare's Plays
Izixhobo eziphezulu kwii-Bike Commuters
Konke malunga ne-Oatmeal, I-Intanethi ye-Intanethi ye-Intanethi ye-Intanethi
Ukufundisa Abafundi Abanobutyebi Bendalo